မျက်စိအားကောင်းသူများ ကြည့်ပေးပါအုံး။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » မျက်စိအားကောင်းသူများ ကြည့်ပေးပါအုံး။
Posted by bigbird on Jun 27, 2011 in How To.. | 22 comments
ပုံထဲက တံတားခုံးပေါ်မှာ မသဲမကွဲအရာလေးတစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။
လူတွေလား? ဘာကောင်လဲ ? ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ မျက်စိအားကောင်းသူများ ၀ိုင်းကြည့်ပေးကြပါအုံး။
လူနှစ်ယောက်ဗျာ ။ တစ်ယောက် က အောက် မှာ ။ တစ်ယောက် က ခွနေတာ ။ တစ်ယောက် က တော့ ယောက်ျား ပဲ ။ ဘာလို့ ယောက်ျားလို့ ပြောရသလဲ ဆိုတော့ ဟိုဒင်း ဟိုဟာ ပြုနေတဲ့ ပုံမျိုး မို့ ။ အပေါ်က ခွနေတဲ့ တစ်ယောက် က ဖင်ကြီးကို ဖြူဖွေးနေတာပဲ ။ ကြည့်ပေး ဆိုလို့ မြင်တာလေး ကို ရေးလိုက်တာနော် ။ မှားနေရင်လဲ ခွင့်ပြု ပါ ခွင့်လွှတ်ပါ ။ ဟီဟိ
အဲဗျ ဘာလုပ်နေကြပါလိမ့်????????လူခြေထောက်လား ဘာလား အောက်ဖက်ကိုထွက်နေတာ
ပျောက်တယ်ဆိုပေမယ့် ရွာနဲ့အဆက်အသွယ်မပျက်ပါဘူး။ အမြဲဝင်ရောက်လေ့လာနေပါတယ်။
အလုပ်တွေများနေတာကြောင့် ပို့စ်တင်ရမှာနဲ့ ၀င်မန်းရမှာ ခပ်ပျင်းပျင်းဖြစ်နေလို့ပါ။
ဦးငှက်က အဲလိုလား.. အသံမပေး ဘာမပေးနဲ့.. ငှက်ပျောက် ကြေညာ ထုတ်တော့မလို့နော်..
ဟိုးတလောက အန်တီဆူးတစ်ယောက် ဒိုင်ခံပြီးပွဲကြမ်းနေတာ ဖတ်ပြီးတော့ ပြုံးနေတာ….
၀င်ပြီးမကူညီလိုက်တာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။ ရွာထဲက သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို အမြဲသတိရလျှက်ပါ။
နပမ်းသတ်နေကြတာပါ ဟုတ်တယ်မို့လား … ။
ရှာရှာဖွေဖွေ ဒီအပေါ်တက်ပြီးဘာလုပ်နေကြပါလိမ့် ……….
လူနှစ်ယောက်ပါ ဘာလုပ်နေကြလဲ ဆိုတော့ မသိပါဘူး.. :D
ရှာရှာကြံကြံ မေးတဲ့လူဗျာ ..အဲ ငှက်ကြီးဗျာ … ဒီမှာ ပါဝါတိုးရင်ဈေးကြီးတယ်ဗျ။
အပေါ်က ပုံက ၀ါးလွန်းလို့ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ဒါနဲ့ google ကပေးတဲ့ service အသစ်ဖြစ်တဲ့ ကိုကြိုက်တဲ့ပုံ သိချင်တဲ့ပုံကို ကလစ်လေးနဲ့ဖိထား ဆွဲယူပြီး Search Box ထဲ ထည့်ပြီးရှာလို့ ရတဲ့ http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi နဲ့ကြည့်ပြီး ရှာလိုက်အတဲ့အခါ တွေ့ပါပြီ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတဲ့ပုံတွေ။
ဘေးနားမှာ ချထားတဲ့ အအေးပုလင်းတောင်မြင်ရတယ်။
လူမြင်ကွင်းမှာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေပါ။
ခြုံတိုးတော့လည်း လိုက်ချောင်းတယ်၊ တည်းခိုခန်းသွားတော့လည်း ဗီဒီယိုခိုးရိုက်တယ်၊ အားလုံးနဲ့ လွတ်ကင်းအောင် အပေါ်တက်ပြန်တော့လည်း ဌက်စာမိတယ်။ ငါတို့က ဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲ…
တိုးတက်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကောင်းမှုရော မကောင်းမှုရော ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိတော့ပါ။
ကြည့်လို့မမြင် မမြင်လို့ကြည့် …
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် PinkCandy ရေ။ ကြည့်ပြီးပြီ။ ထိုင်နေတာက မိန်းမ။ ပုလင်းက ၂လုံး။
၁။လူ၂ယောက် (ကျား၁ ၊မ ၁)
၂။windtalker ရဲ့ အကြောလျှော့နည်း သုံးနေတာပါ။
အနော် က နော် ။ ကိုငှက် က ကြည့်ပေးပါဦးဆိုလို့ နော် ။ မြင်ရတဲ့ ဟာ ကို ရေးပေးတာကိုနော် ။ အနော့ ကို အနီကတ် ပြတယ်နော် ။ အနီကတ် ပြတဲ့သူနော် ။ ယောကျာ်းဖြစ်ဖြစ် မိန်းမ ဖြစ်ဖြစ်နော် တစ်သက်လုံး တစ်ယောက်ထဲ အမြဲ နေရတဲ့ အပျိုကြီး သို့ မဟုတ် လူပျိုကြီး ဖြစ်ပါစေ ဗျာ ။ ဟီဟိ
သူတို့က ဘာလို့ အဲဒီ့အပေါ်တက်ပြီး အဲလို ဖြစ်နေကြတာလဲဟင် … ??
သူများတွေ ထက် ထူးချင်တာလား …. ပေါက်ပေါက်ရှာရှာနော် ။
ကိုယ့်အမြင်ကတော့ မဟုတ်တာ လုပ်နေတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ..
တတံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် တက်နေတာဖြစ်မယ် . အဲသလို ပြုပြင်တာတွေကို .. discovery မှာ တွေ့ရတတ်တယ် ..
တံတား ပြုပြင်ရေးလား ဖျက်ဆီးေ၇းလားတော့ မသိဘူး
၀က်အူလှည့်တစ်ချောင်းတော့ မြင်မိတယ် …. ခွိစ်ခွိစ် ….. :D